Thailandy : Nokaramaina Hanao Fihetsiketsehana Ve Ny Lobaka Mena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2018 4:50 GMT
Namarana ny hetsiny ny Lobaka mena. Voasambotra ireo mpitarika ary nisy didy fampisamborana navoaka ho an”ny praiminisitra taloha Thaksin Shinawatra. Nihetsika nandritra ny herinandro telo ny Lobaka mena ; nangataka ny fialan'ny praiminisitra Abhisit Vejjajiva izay ampangain'izy ireo ho tonga eo amin'ny fahefana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tamin'ny alahady sy alatsinainy farany teo, nisy herisetra nipoaka teo amin'ireo mpanao hetsipanoherana sy ny tafika. Niteraka fahafatesana roa ary maratra an-jatony teny anivon'ireo mpanao fihetsiketsehana ny fifandonana nisy teo amin'izy ireo.
Mpanohana an'i Thaksin ny ankamaroan'ireo Lobaka mena. Thaksin, izay nitsoaka ny firenena mba hahafahana mandositra raharaham-pitsaràna momba ny kolikoly, no niresaka tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny videoconference. Nampangan'ny mpanaratsy azy ho mampiasa ny harenany mba hamatsiana vola an'ireo hetsiky ny Lobaka Mena izy. Iray tamin'ireo hafatra anaty lahatsary nalefan'i Thaksin no avoitran'izy ireo izay, raha ny hevitr'izy ireo, ahitana azy miaiky fa mamatsy an'ireo mpanao hetsiketsika mitafy mena. Efa voajerin'ny olona miisa 250.000 ny lahatsary niaingàna [amin'ny thai]. Ito izy misy dikanteny anglisy :
Nadikan'ilay bilaogera Jotman [amin'ny anglisy] ireo teny mitondra resabe :
Raha averina amin'ny vahoaka ny fahefana demokratika, ary miverina amin'ny lalam-panorenana demokratika isika, na iza na iza no ho eo amin'ny governemanta, vonona ny tenako ny hanome torohevitra. Fa raha tianareo, vahoaka, hody aho haka ny fahefana, vonona ny tenako hanompo anareo. Amin'ny faha-60 taonako aho izao, vonona ny hiasa mafy aho. Ary tsy hila hilahatra ho an'ny 500 baht [10 euros eo ho eo] ianareo. Ry havako, ianareo izay nandray soa tamin'ny vokatrin'ny demokrasia fony mbola teo amin'ny fahefana ny antoko Thaï Rak. Thaï ary izaho no praiminisitra…
Afaka ahitana fibabohana famatsiambola avy amin'i Thaksin an'ireo hetsika mahery natao teny amin'ny làlan'ny Thaïlande ve ao anatin'izany? Sa nanaovany sarinteny ilay fanampiana nomen'ny governemanta an'ireo zokiolona ?
Misy feon-dakolosy hafa momba ilay kabarin'ny praiminisitra [amin'ny anglisy], tahaka ilay avy amin'ny Minisitrin'ny Raharaham-Bahiny tamin'ny fotoana nandrenesana azy iny, izay miresaka momba ny faran'ny fihetsiketsehana tao amin'ny renivohitra.
Raha rasina ny hevitra sy ny ahiahin'ny vahoaka, izay manahy hoe hitondra any amin'ny herisetra ary hiteraka fahasimbana ny fepetra noraisin'ny governemanta mba hanatsaharana ny fihetsiketsehana eo alohan'ny foiben'ny governemanta., nanome antoka ny praiminisitra Abhisit fa tsy mihevitra na iza na iza ho fahavalony ary niezaka im-betsaka ny tsy hisianà fahavoazana sy fatiantoka izy. Ary mba hampitsaharana ireo diabe fanoherana, tsy maintsy niroso ireo mpitandro filaminana ary nangataka tamin'ireo mpanao hetsika izay tsy tia herisetra mba hody. Tamin'ny marainan'ny 14 Aprily, nisy vokany ilay tetika ary nifarana ireo hetsika. Niverina nisokatra ho an'ny fifamoivozanaireo làlana izay voabahana teo aloha. Nanampy an'ireo mpanao hetsika mba hiantohana ny fiverenany hody [any aminy] ny governemanta. Nisaoran'ny Praiminisitra ny ankolafy rehetra tamin'ny fiarahamiasa.
Nanampy an'ireo mpanao hetsika mba hiverina eny amin'ny tanànany ny governemanta tamin'ny fiantohana ny fitanterana azy ireo [amin'ny anglisy]
Nohazavain'ny mpanoratra ny bilaogy Khi Kwai ny antony tsy nirosoan'ny [amin'ny anglisy] Lobaka mena intsony, izay akaikin'ny fandresena rehefa avy nahavita nanafoana ilay fihaonana antamponin'ny Asean [amin'ny anglisy], ary niaiky faharesena nanoloana ny tafi-panjakana.
Fa fahombiazana tanteraka ho an'ny Lobaka mena ilay onjanà hetsika vao haingana. Ireo andianà hetsika voalamina nitondra ho amin'ny fisintahana mahatalanjona tao Pattaya [toeran'ny fihaonana antampon'ny ASEAN] dia naneho fa ny hetsika, izay heverina foana fa mandeha amin'ny herin'ny tenany fotsiny ireo olona ao anatiny ary tsy manaraka fitsipika, afaka maneho fifehezantena tsy ampoizina ary fahombiazana amin'ny fandaminana.
Nefa nivadika vetivety tao anatin'ny ora vitsy ny sanjilan'ny Lobaka mena. Nanombokan'ny alatsinainy hariva, ny mpitantana ny hetsika, izay falifaly tamin'ny voalohany, tsy nahafehy intsony ny teodraharaha. Niparitaka tao Bangkok ireo mpanohana azy, niezaka mafy hanakana ny fandrosoana tsara rindran'ny tafika nanerana ny renivohitra.
Nandeha nijery ny mpanandrony ny bilaogera Thanong mba hahitàna ny dikan'izay mitranga ao Thaïlandy:
Mandalo ao ambonin'ny Lakhana Duang Muang i Neptune izao, manamafy ny heriny amin'ireo toejavatra miseho ao Thaïlandy. ” Mety hsy tranga manahirana hiseho amin'ny hariva ary hiharatsy avy eo” , hoy ny mpanandroko tamin'ny alahady
Fa manomboka ny talata 14 aprily 2009, hiala moramora eo amin'ny Lakhana Duang Muang ary hanantona kokoa ny ankavanan'ny masoandro i Neptune. Izay midika fa hisava ny fambara ratsy na koa ny fahasahirana ao Bangkok. Hihatsara ny toedraharaha.
Lobaka mena tao afovoan'i Thaïlandy. (Sarin'ny mpampiasa Flickr izumiflowers)
Ezahan'ilay bilaogera ny mamaritra hoe iza ny vondrona nanomboka ny fankahalana: ny Lobaka mena, ny Lobaka mavo, ny Lobaka manga, sa ny tafika ? Samy afaka ny ho meloka hoe nitarika ny hetsika mahery setra daholo ry zareo [amin'ny anglisy]. Nanoro hevitra ny minisitra Thaï Abhisit Vejjajiva ny mpanoratra ny bilaogy nganadeeleg mba hametraka fanavaozana lehibe [amin'ny anglisy] mba hanatsarana ny fijerin'ny olona azy ao amin'ny firenena.
Fotoana izao ho an'i Abhisit mba hanapahany hevitra ny amin'izay soritra ho avelany ho ao anatin'ny tantara – azy ny hisafidy raha te-ho hita ho toy ny iray amin'ireo mpamilivily sain'olona ireo na ho toy ny tena mpitondra fanavaozana.
Fa na inona na inona ny ho safidiny, vitsy ny vintana hahafahany handresy amin'ny fifidianana iray malalaka atao anatin'ny fotoana fohy, fa raha misafidy ny làlan'ny fanavaozana izy, betsaka ny olona hitadidy azy amin'ny fifaliana (ary mbola tanora tsara izy ka afaka manantena indray andro any ny handresy amin'nà fifidianana marina sy rariny)
Ny sary nampiasana amin'ny sary kely dia avy amin'ny kaonty Flickr an'i Y-Not.